Bella ၌ဆူးပင် ပို. ပို. ဆာလ်ဖာ: က Pornhub များအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်စေမည် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Bella ၌ဆူးပင် ပို. ပို. ဆာလ်ဖာ: က Pornhub များအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်စေမည်
Bella ၌ဆူးပင် ပို. ပို. ဆာလ်ဖာ: က Pornhub များအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်စေမည်
Bella စူးသောဆူး လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲစေပါသည်။ မော်ဒယ်အဆိုတော်နှင့်စာရေးဆရာ: သူမကသူ၏လေးရန်နောက်ထပ် string ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးအတွက် ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယိုကိုသူမသည်ထို site တစ်ခုညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်နားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြေညာလိုက်ပါတယ် Pornhub. "ကျနော့်ရဲ့ကနဦးစိတ်ကူးတစ်ဦးခရစ္စမတ်ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ခဲ့သည်, ကရှင်းပြခဲ့သည် Bella စူးသောဆူး. ဒါပေမယ့်အစား, ငါသည်အဆင်းလှသောအီရုပ်ရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ " မိမိအရုပ်ရှင်, ခေါင်းစဉ် "သူမရဲ့ & ကိုယ်တော်" စူးစမ်းလေ့လာ "လူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်ကြီးစိုးဘို့ဤရုန်းကန်တို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာ".
" '' သူမရဲ့ & ကိုယ်တော်ကို '' လိင်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အတွက်စိတ်မဝင်စားသူနှစ်ဦးကိုဖြတ်ကျော်ချစ်သူများကိုယ်စားပြု Romeo နဲ့ Juliet တစ်မော်ဒန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်ပါသည်အဆိုပါဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Pornhub ဖော်ပြထားသော, Corey စျေးယင်းကိုခြီးမှမျး "Creative နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း" de Bella စူးသောဆူး။ ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဘို့, 21 နှစ်ပေါင်း၏မော်ဒယ်ဝမ်းသာသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရှေ့တော်၌လူသိများတစ်ခါမျှသောသတ်မှတ်ချက်အပေါ်အမှန်တကယ်ဘဝကြောင့် "ဒီရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ "တော်တော်ပျော်စရာပတ်ဝန်းကျင်င် သူမကဆိုသည်။
ယင်းနောက်တွဲယာဉ်ထဲမှာကျနော်တို့သရုပ်ဆောင်သူ့ရည်းစားတစ်ဦးရှာဖွေရေးဖုန်းကိုဖတ်ရှုတွေ့မြင်: "ဘယ်လိုသူမ၏ရည်းစားကိုသတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ရရန်"။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Bella စူးသောဆူး အဆိုတော်များအပါအဝင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ဧည့်သည်များ featuring, ဒါရိုက်တာရဲ့အမြော်အမြင်စီးရီး Pornhub ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Brooke Candy နှင့်လူငယ် MA။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Bella ၌ဆူးပင်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ကျင်းပစေမည်အကြောင်း, Oldenburg ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာလာမည့်လတွင်လေပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် Pornhub ပရီမီယံစာရင်းသွင်းသူအွန်လိုင်းမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်
မင်းသမီး Bella ၌ဆူးပင်သည်သူ၏စာအုပ် "ဟု Wannabe Mogul စိတ်ဖရိုဖရဲများ၏ဘဝက" မြှင့်တင်နေပါတယ်
မင်းသားချားလ်စ်ရှည်လျားအင်ဒရူး Epstein နှင့်အတူချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုကွောကျရှံ့ထားပါတယ် - လူတွေ
Meghan Markle Archi ဟယ်ရီနှင့်အတူ '' ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်နဲ့ Ibiza အတွက် '' သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အပေါ်ကြာ
အားကစား Roundup - ဗွီဒီယို